TADIDINAO ve ny firesahana ny amin’ireo zatovolahy telo ireo? Eny, ireo dia naman’i Daniela. Nanda tsy hihinana izay tsy tsara ho azy ireo izy. Ny Babylonianina dia niantso azy hoe Sadraka, Mesaka ary Abednego. Nefa jereo izy ireo izao. Nahoana izy no tsy miankohoka amin’io sary goavana io tahaka ny olona hafa rehetra? Aoka hojerentsika.
Rehefa nahare izany i Nebokadnezara, dia vao mainka feno fahatezerana. Nisy lafaoro teo akaiky teo ka nandidy izy hoe: ‘Hafanao impito mihoatra noho ny taloha ny lafaoro!’ Avy eo dia nasainy nafatotry ny lehilahy natanjaka indrindra teo amin’ny tafiny i Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ary natsipy tao amin’ny lafaoro. Nafana loatra ny lafaoro ka matin’ny lelafo ireo lehilahy natanjaka. Nefa ahoana ny amin’ireo zatovolahy telo izay natsipy tao?
Hizara Hizara Tsy Niankohoka Izy Ireo
my tant. 77